[Ukara] Wondershare 3D Style Pack: Mee 3D Slideshows
My obere azụmahịa nwere a-eguzosi ike n'ihe na-esonụ, ma anyị mkpa ihe na showroom n'ezie na dazzle ndị gaara nnọọ jere ije anya n'okporo ámá. Nke a ike mkpọ m DVD ngosi mmịfe Nrụpụta bụ nnọọ ihe dị m mkpa. Ugbu a, mgbe folks na-eje ije, ha na-ahụ ihe animated Montage nke oké results m ụlọ ọrụ na-enye.
Ntak emi Họrọ Ọ?
Wondershare 3D Style Pack Maximizes foto gị na ngosi mmịfe ahụmahụ na anyị ngwaahịa DVD Slideshow Builder Deluxe na Standard. Na ya, ị ga-esi ụzọ ọhụrụ iju onye ọ bụla maka gị video talent, gụnyere onwe gị. Ọ na-agụnye ihe karịrị 10 "Nye" nke na-ewu ewu 3D video mmetụta, dị ka 3D Cube, Photo Flow, 3D Wall, 3D Square, 3D Carousel, 3D Box, na na.
Chọrọ na-agbalị 3D nkiri ekwekọghị? Ugbu a download DVD Slideshow Builder Deluxe version ma ọ bụ Standard version for free ikpe. Ma otu ugboro ọzọ, i kwesịrị ịzụta ma ndị software na ịke mkpọ ike 3D ngosi mmịfe na 3D nkiri mmetụta. Unu mara na 3D ekwekọghị nwere ike na-ga-eji na Standard mode na oge.
Download DVD Slideshow Builder Deluxe ka onwe Gbalịa All 480+ Movie Nye
Rịba ama: 3D Nye bụ nanị dị na Standard mode nke DVD Slideshow Builder Deluxe
Olee otú Ọkụ Lightroom ngosi mmịfe ka DVD